Air France voamarina tamin'ny COVID-19 Airline Safety Rating
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air France voamarina tamin'ny COVID-19 Airline Safety Rating
Janoary 16, 2021
Air France dia mamoaka ny fepetra henjana indrindra momba ny fahasalamana sy ny fahadiovana na amin'ny tany na amin'ny sambo mba hiantohana ny dia azo antoka tanteraka
Ny Air France dia voamarina tamin'ny COVID-19 Airline Safety Rating taorian'ny fanaraha-maso manerantany notontosain'ny maso ivoho iraisam-pirenena Skytrax.
Ity fanaraha-maso ity, notontosaina tamin'ny Desambra 2020 tamin'ny sidina Air France sy sidina lavitra be, dia manombana ny paikadin'ny fiarovana ny zotram-piaramanidina, voalohany indrindra ny fahombiazana sy ny tsy fitovizan'ny fepetra fiarovana sy fahadiovana napetraka mba hiarovana ny mpanjifa sy ny mpiasa amin'ny Covid-19. Ireo fepetra ireo dia misy ny fomba fanadiovana sy famonoana otrikaretina any amin'ny seranam-piaramanidina sy amin'ny fiaramanidina an-tsambo, famantarana manokana sy marika amin'ny gorodona, tolo-kevitra momba ny fanalavirana ara-batana, fanaovana sarontava an-tery ary fanomezana fanadiovana tanana.
Air France, aorian'ny nahazoana naoty 4-kintana, dia efa manatsara ny tanjona hahazoana ny naoty 5-kintana, ary mahazo ny isa ambony indrindra amin'ny COVID-19 Airline Safe Rating.
Ny Air France dia mametraka ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpanjifany sy ny mpiasa ao aminy. Hatramin'ny nanombohan'ny krizy Coronavirus, ny orinasa dia namoaka ny fepetra henjana momba ny fahasalamana sy ny fahadiovana na amin'ny tany na amin'ny sambo mba hiantohana ny dia azo antoka tanteraka. Ao anatin'ny fanoloran-tenany "Air France Protect", ireo fepetra ireo dia ampifanarahana matetika mifanaraka amin'ny fiovan'ny toe-pahasalamana.
Manohy ny sidina Qatar, India, Vietnam ary Failandy i Russia
Afrika dia kasaina hamoaka ny pasipaorony tokana amin'ity taona ity